ဘုန်းကျော်: ရိုဟင်ဂျာအတွက် မဲပေးကြဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါသည်
ရိုဟင်ဂျာအတွက် မဲပေးကြဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါသည်
ရိုဟင်ဂျာလို့ ခေါ်တဲ့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ့် က လူတွေဟာ သူတို့ ကိုသူတို့ မြန်မာပြည်က တိုင်းရင်းသားလူမျိုးဖြစ်တယ်လို့ပြောလာတာကြာပါပြီ။ ကျနော်က သူတို့ ကို မြန်မာပြည်ရဲ့ တိုင်းရင်းသားအုပ်စု တစ်စု အဖြစ် ဘယ်လိုမှ ခံစားပေးလို့ မရဘူးဖြစ်နေတယ်။ ရိုဟင်ဂျာဆိုတဲ့စကားလုံးက အတော့်ကို ခေါင်းစားတဲ့စကားလုံ့းပဲ။ ဖြစ်နိုင်ရင် သူတို့ နဲ့ ပက်သက်ပြီး လူထုဆန္ဒခံယူပွဲ လုပ်ချင်တယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျနော့်မှာ လုပ်ပိုင်ခွင့် အာဏာမရှိဘူး။ ဘယ်လို ဆန္ဒခံယူချင်လို့ ဆိုတော့ ဒီလိုပါ။ ရိုဟင်ဂျာကို ကျနော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံက တိုင်းရင်းသားတွေက သူတို့ ဟာတိုင်းရင်းသားလူမျိုးတစ်စုဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာနဲ့ ပက်သက်ပြီး ကိုယ့်ဆန္ဒကို ပြောကြစေချင်တယ်။ ရလာတဲ့ ဆန္ဒမဲတွေက သူတို့ အတွက် အဖြေပဲ။ နို့ မို့ ဆိုရင် ရှင်းပြရတာ အာညောင်းတယ်။ ဆိုတော့ လူတိုင်းကို မဲပေးကြဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါသည်။ မဲပေးချင်ရင် ဒီလင့်ကို နှိပ်လိုက်ပါ။ ကုလားတွေလည်း ပေးပါ။
ရေးသားသူ - ဘုန်းကျော် at Friday, September 16, 2011
လီးပဲကွာ ဂုံးကျော် မင်းက စောက်လုပ်မရှိ ကြောင်လဥ ဂွေကိုင်ပေးနေသလိုပဲ ဒီကုလားတွေ ငါ့တို့ တိုင်းရင်းသားဟုတ်မဟုတ် မင်းစောက်ပူမပါဘူး ငါ့စောက်ပူလဲမပါဘူး ကျိန်းသေတာကတော့ ကိုးကန် ရယ် ရိုဟင်ဂျာရယ်က ငါတို့ တိုင်းရင်းသားလုံးဝမဟုတ်တာကျိန်းသေတယ်၊ ဝ ကတော့ ငါတို့တိုင်းရင်းသား ၊ ဝ အစစ်ကိုပြောတာနဲ့ မျက်စေ့မှေးမှေးနဲ့ ယူနန်တရုပ်ခေါင်းဆောင်ပိုင်းကကောင်တတွေကိုပြောတာမဟုတ်ဘူး၊ ဝ စုစုပေါင်းမျိုးကွဲ ၃၂ မျိုးလောက်ရှိတယ်ကြားဖူးတယ် ဒီကောင်တွေ ဘာသာစကားက အင်္ဂလိပ်အယ်လ်ဖာနဲ့ရေးတာ ချင်းနဲ့ တူတူပဲ ရေးပုံရေးနည်းက အသံထွက်တွေဘာတွေ တော့မတူဘူးပေါ့ကွာ၊ ရိုဟင်ဂျာကတော့ ဒို့ နိုင်ငံသားတိုင်းရင်းသားမဟုတ်တာကျိန်းသေတယ်။
ငါတော့ ရိုဟင်ဂျာကိုလည်း သဘောတူတယ်
နယ်ချဲ့ ဗမာကိုတော့ လုံးဝ သဘောမတူဘူး
အဲဒါကြောင်း ငါလိုးမသား နယ်ချဲ့ ဗမာတွေကို
အဲဒါကြောင်း နယ်ချဲ့ဗမာကို ရိုဟင်ဂျာရော တခြားလူမျိုးတွေပါ ၀ိုင်းပြီးတိုက်ထုတ်ကြ
ရိုဟင်ဂျာ ကို တိုင်းရင်းသားဟုတ်မဟုတ်သိချင်ရင် ရခိုင်ပြည်မြောက်ပိုင်းမှာနေတဲ့ သက်ကြီးရွယ်အို ရခိုင်လယ်သမားတွေကိုမေးကြည့်နိုင်ပါတယ်--ဘင်္ဂလီကုလားတွေ စပါရိတ်သိမ်းရာသီတွေမှာ ဘယ်လိုခ်ိုးဝင် လာခဲ့ကြတယ်-ကူလီဘယ်လိုလုပ်ခဲ့ကြတယ်-အဆဲခံ အဆိုခံ အရိုက်အပုတ်ခံ-ဘယ်လိုဘဲခံ၇ရခံရ ထိုအချိန်က ကုလားပြည်မှာငတ်နေကြတော့-မြေတူး-မိလ္လာသိမ်း ကအစလုပ်နိုင်ကြေတော့ နှစ်စဉ် ထောင်သောင်းချီခိုးဝင်လာခဲ့ကြတာပါ--ကျွန်ျတတော်တို့ကိုယ်တိုင် ကုလားတွေ ဘယ်လိုခိုးဝင်ခဲ့ကြတယ်ဆို တာသက်သေပေးနိုင်ပါတယ်--ဒါကျွန်တော်တို့ခောတ်ကပါ-ဒီလိုဘဲကျွန်တော်တို့ဘိုးဘွားတွေလက်ထက်က စ၀င်လာခဲ့ကြတဲ့ကုလားတွေက ခုတော့သူတို့တိုသူတို့ ရိုဟင်ဂျာလို့ပြောလိုပြော-Arakan လို့ အမည်ခိုးလိူုခိုး သမိုင်းလိမ်တွေရေးလိုရေး--ဒီလောက်အရှက်မရှိတဲ့ လူလိမ်တွေကို ဘယ်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကမှ တိုင်းရင်းသားလို့ လက်ခံကြမှာမဟုတ်ပါဘူး--သရက်ပင်ကိုညောင်မျိုးသလို သူတို့ကို သနားလို့လက်ခံလိုက်မယ်ဆိုရင် မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာကို မူဆလင်ကုလားတွေ မျိုသွားကြမှာ မြေကြီးလက်ခတ်မလွဲပါ
အင်္ဂလိပ်ခောတ် ထုန်ပြန်ခဲ့တဲ့ ဂေဇက် တွေမှာ ဘင်္ဂလီကုလားတွေ မြန်မာနိုင်ငံကို ဘယ်လိုခိုးဝင် ခဲ့ကြတယ်ဆိုတဲ့ မှတ်တမ်းမှတ်ရာတွေ အများကြီးဖေါ်ပြထားတာရှိပါတယ် လေ့လာကြပါ
ရိုဟင်ဂျာ ဆိုတာ ဘင်္ဂလားကုလားပါဘဲ၊ အရင်ခေတ်ကောင်းတုန်းက လ၀က ကို ပိုက်ပိုက်တွေပုံပေးပြီး နိုင်ငံသားကဒ် ရသွားပြီး ဘိုကလေးဈေးမှာ ထိုင်ပြီး ဖိနပ်ချုပ်နေတဲ့သူတောင်းစားတွေကိုတော့ ရခိုင်ကုလားလို့ခေါ်ကြတယ် ၊အဲဒါလဲ ရိုဟင်၈ျာဘဲ။
လုံးဝလက်ခံလို့မရပါ။အလွန်ညစ်ပေ စုတ်ပြတ်သော အောက်တန်းစားလူမျိုးဖြစ်ပါတယ်။
Dear phone kyaw, i disagree rohinga because of they are orginal come from bangladesh so, they are not burma ethincity, we cann't acept them.
တချို့က ရခိုင်လေသံနဲ့ ရိုဟင်ဂျာကိုလက်ခံတယ် ဗမာကိုလက်မခံဘူး--ဗမာကိုတိုက်ထုတ်ရမယ် လို ရေးကြတာနေတွ့၇ပါတယ်
ဒီလူတွေဟာ ရိုဟင်ဂျာအမည်ခံ ဘင်္ဂ လီ ခိုးဝင် တွေဘဲဖြစ်တယ်။သူတို့အကျင့်အတိုင်း ရခိုင်ယောင်ဆောင်ပြီးဗမာနဲ့ရခိုင်ကို ဘေးတီးပေနေ တယ်ဆိုတာထင်ရှားပါတယ်။
တကယ်တော့ ဗမာက ဗုဒ္ဓဘာသာပါ-ရခိုင်တွေနဲ့ ယဉ်ကျေးမှုရောဘာသာရောဓလေ့စရိုက် တွေရောတူပါတယ်-မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဗမာနဲ့ ယဉ်ကျေးမှုရော-ဘာသာစာပေရော-စကားရော အတူဆုံးလူမျိုး ဟာ ရခိုင်တွေဖြစ်ကြပါတယ်--
ဒီတော့ ရခိုင်လူမျိုးတွေအနေနဲ့ ဗမာနဲ့၇ိုဟင်ဂျာမူဆလင်ကိုဘယ်သူကို ရွေးမလဲဆိုရင်တော့ဗမာကိုရွေးရင်လူမျိုးပျောက်ရင်သာပျောက်မယ် ဘာသာ သာသနာတော့ မပျောက်နိုင်ပါဘူး
ရိုဟင်ဂျာမူဆလင်ကုလားကိုရွေးကြမယ်ဆိုရင်တော့-လူမျိုး-နိုင်ငံ-ယဉ်ကျေးမှုသာမက ဘာသာ သာသနာပါ ပျောက်ကွယ်သွားပါလိမ့်မယ်-ဒီတော့ ရိုဟင်ဂျာအမည်ခံ-Arakan အမည်လိမ် ဘင်္ဂလီကုလားတွေကိုသာတိုင်းပြည်မှမောင်းနှင် ထုတ်ပစ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ရိုဟင်ဂျာတွေဆီက အတုယူစရာတခုရှိတယ်၊ ရိုဟင်ဂျာတွေဟာ ရခိုင်ပြည်ကတဆင့် ရိုးမကိုဖြတ်(ညောင်ကျိုး) ရန်ကုန်ကိုရောက်တာနဲ့ သွပ်ပြားအဟောင်းအစုပ်လေး ၃-၄ ချပ်လောက်ရှိရင် ကွမ်းယာဆိုင်စဖွင့်တော့တာပဲ ကျုပ်မြင်ဖူးတဲ့ တယောက်ဆို သိပ်မကြာဘူး ၄-၅ နှစ်လောက်အကြာမှာ နာရီဆိုင်ပိုင်ရှင်ကြီးတယောက်ဖြစ်သွားတယ်၊ အဲ့လို ခြစ်ချုပ်စုပြီး သဌေးဖြစ်သွားတဲ့ ရိုဟင်ဂျာတွေ အများကြီးပဲ
"လူ့ဘောင်ချစ်" ဆိုတော့လူသားတွေရဲ့စည်းမျဉ်း၊စည်းကမ်း၊အခွင့်အရေးတွေကိုလိုက်နာရုံမက ချစ်ပါချစ်တယ်လို့ယူဆပါတယ်၊
ရိုဟင်ဂျာဆိုတာ ဘင်္ဂလီကုလားတွေပါ သူတို့ဟာ အကြမ်းဖက် ဂျီဟက်တွေနဲ့လဲအဆက်အသွယ်ရှိပါတယ်
ကိုယ့်ဘာသာ သာသနာ ကိုယ့် ပြည် ကိုယ့်မြေ ပျော်ကွယ်သွားမှာကို ဘယ်အတိုက်အခံ ဘယ်အစိုးရ ဘယ်လိုတိုင်းရင်းသားလူမျိုးကမှလက်ခံလို့မရပါဘူး
ဒါဟာ သမိုင်းကပေးတဲ့အမျိုးသားရေတာဝန်ပဲ ဒီမဲပေးတဲ့အထဲမှာ ရိုဟင်ဂျာ ဟာတိုင်းရင်းသားပါလို့မဲပေးထားတာတွေ
သဘောတူတာတွေဟာဟာ ဘင်္ဂလီကုလား ယာရှင်ကိုမျောက်နှင် မဲ့ လူတွေပါပဲ သူတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာ လွတ်လပ်စွာနေခွင့်ပေးတယ် ဗလီတွေဆောက်ပြီးလွတ်လပ်စွာကိုးကွယ်ခွင့်ပေးတယ်
ဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံအများစုဟာ ဘယ်လို ဘာသာရေးသွပ်သွင်းခံရတယ် ဆိုတာ လူတိုင်းသိကြမှာပါ အမျိုးသားရေအမြင်ရင့်ကျက်ကြပါစေ
တစ်လုပ်စာကိုတစ်သက်စာထင်ပြီး မြွေပွေးကို ခါးပိုက်ထဲမထဲ့မိပါစေနှင့် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
every nationalites have several religion,if Rohinger has several religion ,I will accept them. In Japan some of the people ,omit Rakhine and use Rohinger to UNHCR ceremony and others.that[s why I hate them. the Japanese people who interested in Burmese politics they accept Rohinger and said pity(poor things??).
ဟို...အထက်ရေးခဲ့ကြတဲ့ ငါလိုးမကောင်းတွေ ... မင်းတို့ဘာပဲပြောပြော..မင်းတို့အမေ ဖင်းကိုထောင်လိုးသွားမဲ့..(ရိုးဟင်ဂျာ)အမည်ခံ ကုလား ဘင်္ဂလီတွေကို စောက်ကျင့်မကောင်းတဲ့ မင်းတို့ကောင်းတွေက တောင်ပြောမြောက်ပြောလုပ်နေ ကြတယ်...နောက်ဆို မင်းတိုမအေပါသွားရုံးမက မင်းတို့..ညိတွေပါ...ဗိုက်ကြီးပြီးကျန်လိုက်ဦးမှာကွာ...သတိထားကြ။ ရိုဟင်ဂျာဆိုတာ စောက်သုံးမကျတဲ့ ဗမာ့ခေါင်ဆောင် နအဖခွေတွေမြောက်ပေးလိုက်လို့....မင်းတို့မအေ ညီမတွေကို တက်လိုးနေတာကွ မယားငယ်လုပ်နေတာ....စောက်သုံးမကျတဲ့ ဒီခွေကောင် (ဘုမား)(မြန်မာ)ဗမာတွေကြောင့်ပေါ့ကွာ... တခြား(မြန်မာ)မဟုတ်တဲ့ ကရင်.ချင်း.ကျချင်.မွန်.ရခိုင်စသောလူမျိုးကြီးတွေမပါဘူးကွ..ဖင်ခံတာ ဒိခွေကောင်းဗမာ(မြန်မာ)တွေပဲ.....
လန်ဒန် မှာ ကုလားဆိုးတွေ ဆန္ဒပြပြီးတောင်းဆို ထားတယ် မြန်မာတိုင်းရင်းသားဖြစ်ခွင့်နှင့် လူအခွင့်အရေးအတွက် ကျွန်တော်တစ်ခုတွေးမိတာက အင်္ဂလန်နိုင်ငံသားတွေ ယုံလားမယုံး မသိပါဘူး ၁၉၄၈ မှာ အင်္ဂလိပ်ကိုလိုနီ လက်အောက်က မြန်မာပြည် လွတ်လပ်ရေးပေးတုန်း က ဒီလိုရိုဟင်ဂျာ ဆိုတဲနာမေနဲ ပါရဲလား ၊ဒီနာမေကြားဖူး သလားလွတ်လပ်ရေးပေး တုန်း မှတ်တမ်းတွေ ကိုပြန်ကြည့်သင့်တယ်။ ဒီအစီစိဉ်တွေကို ဘင်္ဂလားဒေရှ့် မှာရှိတဲ မော်လ၀ီတွေ နဲ အစ္စမစ်ဘာသာရေးအဖွဲ့တွေ က လုပ်ဆောင်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ် န၀တအစိုးရက ၁၉၉၂ခုနှစ်က ကုလားဆိုးတွေ ကို စီစစ်ရေးလုပ်တော ဘင်္ဂလားကိုထွက်ပြေးကြတယ် ဟိုလေးရောက်ရော လူ၅၀၀ထွက်ပြေသွားတာက လူ တစ်သောင်းကျော်ဖြစ်သွားပါတယ် ဘာဖြစ်လိုဆိုတော ဘင်္ဂလာဒေရှ့်နိုင်ငံသား ဆင်းရဲးသားအခြေမဲ့အနေမဲဘင်္ဂလီတွ ကို စုဆောင်းကာ ဒုက္ခသည်ကန့် တည်ထောင်ပေးလိုက်ပါတယ် ဘင်္ဂလားမှုဂျာဟစ်ဒင်အဖွဲ့၏ နယ်မြေချဲထွင်ရေး ပရိုးဂျက်ဆိုရင်မမှားပါဘူး၊ ဘူးသီးတောင်၊မောင်းတော က အထက်တန်းအောင်တဲ့ရိုဟင်ဂျာကုလားဆိုးတွေ ကို အာရပ်ကမ္ဘာ ကိုပညာတော်သင်လွတ် ၊ရိုဟင်ဂျာနိုင်ငံတည်ထောင်ဖို့တာလီဘန်တွေ ဆီမှာ စစ်သင်တန်းတွေ ဖေါက်ခွဲရေးသင်တန်းတွေကို လစ်ဗျားနိုင်ငံ မှာသွားပြီး သင်ယူကြပါတယ်
ဒီဟာတွေ က ရိုဟင်ဂျာအမည်ခံဘင်္ဂလီတွေရဲ နယ်မြေချဲထွင်တဲ မဟာစီမံကိန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ် ရိုဟင်ဂျာဆိုသူတွေကို မြန်မာတိုင်းရင်းသာအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုပေးပါက ဘင်္ဂလားဒေရှ့်နိုင်ငံသားဘင်္ဂလီအားလုံးဟာလည်းဘဲ မြန်မာတိုင်းရင်းသားတွေ ဖြစ်သွားပါမည်။ အဲဒီတော ဒီချစ်တီးဘင်္ဂလီလယ်ကူလီအနွယ်တွေကို မိခင်နိုင်ငံဘင်္ဂလားဒေရ့်ှကိုပြန်ပို့ သင့်ပါတယ် ရိုဟင်ဂျာဘင်္ဂလီတွေ မြန်မာပြည်သားတွေမဟုတ်ပါဘူးဘင်္ဂလာဒေရှ့်နိုင်ငံသားနယ်မြေချဲ့ထွင်ရေးသမားတွေ ဖြစ်ကြပါတယ်
ရိုဟင်ဂျာဘဲခေါ်ခေါ် ဘဂ`်လီဘဲဆိုဆို တိုင်းရင်းသားလို.
လက်မခံနိုင်တာတော့ အမှန်ဘဲ။ ဒါပေမဲ့နေလာတာကြာလို့
ဆက်နေမယ်ဆိုလည်းဆက်နေ။ အေး... အခွင့်အရေးတော့မတရားတောင်းမလာနဲ့။ ဆိုလိုတာက နေရာသတ်မှတ်ပေးပါတို့။ နိုင်ငံသတ်မှတ်ပေးပါတို့တို့တော့လုပ်မလာနဲ့။ကြိုပြောထားတာ။ကုလားတွေက ကုလားအုပ်တွေလို ခေါင်းဝင်ကိုယ်ဆန်. ၊ နေစရာပေးရင်အိပ်စရာတောင်း လုပ်တတ်ုကလွန်းလို့
အဲဒီ ရိုဟင်ဂျာလို့ လိမ်နေကြတဲ့ကုလားတွေကို အားလုံးဗမာပြည်မပို့ပစ်ရမယ်။ ဒါမှဗမာတွေသိမှာ။ ရိုဟင်ဂျာဆိုတာ တကယ်ရှိမရှိကို။ ရိုဟင်ဂျာတိုင်းရင်းသားပါလို့ ပြောပြီးရင် ဗန္ဒုလ ဟာ အဗဒူလာပါလို့ပြောမှာ စိတ်သာချ။ မောင်တောက ကုလားလူငယ်တွေကိုမေးကြည့်ပါအုံး။ ဗန္ဒုလကို အဗဒူလာ ပြောနေတဲ့ကောင်းတွေအများကြီးဘဲ။ ရခိုင်ပြီးရင် ဗမာအလှည့်ရောက်လာမှာ။ စိတ်သာချ။
ဗုဒ္ဓတရားတော် ဆုံးမစာများတွင် ကောင်းသော အရာကိုစဉ်းစား၊ ကောင်းသောအရာကိုလုပ်၊ ကောင်းသောစကားကိုပြောရန်ပါရှိပါတယ်။
မိမိ၏စကားတခွန်းသည် လူတဘက်သားကို မထိ ခိုက် စေရန်လိုအပ်ပါတယ်။ နှစ်ဘက်စိတ်ချမ်းသာစေမဲ့စကား၊ အကျိုးရှိစေမဲ့စကားများ သာပြောသင့်ပါ။
ကောင်းသောအရာကိုစဉ်းစား၊ ကောင်းသောအရာကိုလလုပ်၊ ကောင်းသော စကားကို ပြော ခြင်း ဖြင့် မိမိနှင့်မိသားစုအပါအဝင် လူ့ဘောင်အဖွဲ့အစည်း တစ်ရပ်လုံးကိုငြိမ်း ချမ်းမှုဖြစ်စေပါသည်။
ကောင်းသောအရာကိုစဉ်းစား၊ ကောင်းသောအရာ ကိုလုပ် ကောင်းသော စကားကိုပြောခြင်းတို့သည် လောဘ၊ မောဟ၊ မာန်မာနတို့အား လျှော့ချခြင်း၊ ကိလေသာနည်းခြင်း တို့နှင့်မိမိ၏ဦးနှောက်နှင့်
စိတ်နှလုံးကိုကြည်လင်စေပါသည်။ ပူပင်သောကကို လျှော့နည်း စေ၍ ကျန်းမာရေးလည်းကောင်းပြီး အသက်ရှည်စေပါတယ်။ ကိလေသာနည်းလျှင် သတိဆိုသောအရာက မိမိ၏အရှက်နှင့်ဂုဏ်သိက္ခါတို့ကိုထိန်းသိမ်းစေသည်။ ဟန်ဆောင် သော ကမ္ဘာက
မိမိထံမှထွက်သွားပြီး လေးနက်မှုရှိသော မိတ်ရင်းဆွေရင်းသာ ကျန်ခဲ့မည်။ စာဖတ်သူအပေါင်းရွှင်လန်းကြပါစေ။
အာဖရိကန်လူမျိုးကို နီကရိုးလို့ခေါ်လျှင် အာဖရိကန်တွေ မကြိုက်ကြပါဘူး။ ၎င်းတို့ကို နှိမf ၍ ခေါ်သည်ဟု ၎င်းတို့မှခံစားရပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာမွေးသည့် မွတ်စလင်မ် နှင့် ဟိန္ဒူများကို ကုလားဟု ခေါ်လျှင်၎င်းတို့မကြိုက်သလို၊
မြတ်စွာဘုရားကိုကုလားကြီးလို့ခေါ်လျှင် မြန်မာလူမျိုးများလည်းမကြိုက်ကြပါ။ လူတ rျိုးနှင့်တ မျိုး တ edkifiHတည်းrSmနေပြီး/ တ ဦးကိုတ ဦး လေးစားမှု (Respect) ရှိကြမှသာလျင် တိုင်းပြည် လည်း ငြိမ်းချမ်းမှုဆိုတာ ရှိနိုင်ပါမည်။
မိမိ မိသားစုဝင်ဖြစ်စေ၊ အိမ်နီးချင်းဘဲဖြစ်စေ၊ ဆွေမျိုးသားချင်းဘဲဖြစ်စေ အမြင်ကျဉ်း မြောင်း နေလျင် မိမိဖက်က အမှန်ကိုပြသရမည်။ လူများတွင်သတိ လက်လွတ်ဖြစ် တတ်ကြပြီး ''ငါ'' ဟူသော အတ္တစိတ် အနဲနှင့် အများရှိကြသည်။ ဗုဒ္ဓမေတ္တာတရား နှလုံးမသွင်းနိုင်ပါက ထိုသူသည် ကျဉ်းမြောင်းသော လူမျိုးကြီးဝါဒ လွှမ်းမိုးကာ မျက် ကန်း မျိုးချစ် ဖြစ်လာမည်။
သို့သော် သတိနှင့်အသိလက်မလွှတ်သင့်။ ကိုာ့်ကိုစော်ကားလာမည့်သူတွေကိုကုလားအုတ်ရွက်ဖျင်တဲထဲပေးဝင်သလိုမဖြစ်အောင် မီးကိုမလောင်ခင်ကတားတာပိုကောင်းပါသည်။ နောင်မှနောင်တမရသ်င့်။ ဝတွေကိုတရုတ်အုပ်စီးမိထားပြီကို ကြည့်ပါ။ လက်မလွတ်တော့ပါ။ စောစောကတည်းက ဒူးနေ၇ာဒူး တော်နေ၇ာတော် မိမိတို့တိုင်း၇င်းသားများနှင့်စည်းတခုတော့တားထား၇မည်။ နေ၇ာပေး၍ မ၇သောသူများဖြစ်ပြီး အ၇ိပ်နေနေအခက်ချိုးချိုး သားေ၇ပေါ်အိပ်သားေ၇နားစားတတ်တဲ့ သမိုင်းစဉ်ကယခုတိုင်လက်တွေ့ တိုင်း၇င်းသားစစ်စစ်တိုင်း မြင်တွေ့နေရသည် မဟုတ်ကြပါလော။ လူကိုလူလို့မြင်နိူင်သော်လည်း ဘီလူးစည်း လူ့စည်းတော့ရှိကြသ်င့်သည်။
khin maung than said...
A Bama said...
Myoo Chit said...
ယခင် အမေရိကန် သမျွတ ဘုရ်ှရဲ. လိမ်လည်မူကီး http://www.scribd.com/fullscreen/69070038?access_key=key-75v6gloyy5fq2ustyib
ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးနွယ်စုကို ကန်.ကွက်သူများသိစေရန် ကျွန်တော်တို့ ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးနွယ်စုတွေဟာ ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ရှေးခေတ် အဆက်အဆက်က နေထိုင်လာခဲ့ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များဖြစ်ကြပြီး၊ ရခိုင်လူမျိုးများနဲ့အတူ ယှဉ်တွဲနေထိုင်လာခဲ့တယ်။ ကျွန်တော်တို့ ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးနွယ်စုတွေနိုင်ငံခြားသားအလျဉ်းမဟုတ်ပါ။ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း ၁၀၀၀ ကျော်ကတည်းကနေထိုင်လာခဲ့ရာ၊ ၁၇ ရာစုသို. ရောက်တဲ့အခါ ရခိုင်ပြည်ရဲ. နန်ပြင် မွတ်စ္စလင်မ်တွေရဲ.ုသဇာ အာဏာတိကမျွကြီးမားကြောင်း၊ သမိုင်းအထာက်အထား ခိုင်လုံစွာရှိပါတယ်။ ၁၇၈၄ခုနစ်၊ မတိုင်မှီကပင် ရခိုင်ပြည်တွင် မူရင်းတိုင်းပြည်အဖြစ် နေထိုင်လာခဲ့သူများပီပီ၊ ၁၉၄၈ ခုနစ်၊ အခြေခံ ဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၁(က)(ခ)နဲ.(ဂ)အရ၊ နိင်ငံသားအဖြစ်သို့လည်ကောင်း၊၁၉၄၈ ခုနစ်၊ နိင်ငံသား အက်ဥပဒေ ၃(၁) အရ၊ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးတမျိုးတွင် အကျုံးဝင်ပြိး တိုင်းရင်းသားများ အဖြစ်မှတ်ယူသူများဖြစ်ကြောင်း ထင်ရှားပါတယ်။ ၁၉၅၄ ခုနစ်၊ စကတင်ဘာ(၂၅)ရက်နေ. ည ၈ နာရီအချိန်တွင် နိင်ငံတော် ဝန်ုကီးချုပ် ဦးနသည် မြန်မာ့အသံလွှင့်ဦးစီဌာနမှ ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် မှီတင်းနေထိုင်တဲ့ ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးနွယ်စုများဟာ မြန်မာ့နိုင်ငံတိုင်းရင်းသားလူမျိုးမျိုးဖြစ်ကြောင်းအသံ
အာရာကန်ပြည်နယ်ဖြစ်တည်းကတည်းက ရိုဟင်ဂျာမျိုးနွယ်စုဆိုတာ ယင်းဒေသမှာ ရှိခဲ့၏ အာရာကန်ရှိနေသေးသ၍ ရိုဟင်ဂျာမျိုးနွယ်ဆိုတာလည် ရှိနေအုံးမည်၊ လွတ်လပ်ရေးနောက်ပိုင်း မြန်မာ့အသံက တိုင်းရင်းသားအစီးစဉ်းမှာ ရိုဟင်ဂျာယဉ်းကျေးမှုအစီးစဉ်းကို ရိုဟင်ဂျာဘာသာဖြင့် ထုတ်လွှင့်ခွင့်ရခဲ့ခြင်း နှင့် ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုများပြုစုစစ်တမ်းတွင်လည် ရိုဟ
ငါလိုးမသားဘင်္ဂလီတွေ တိုင်းရင်းသား၊ နိူင်ငံသားလာမတောင်းနေနဲ့ လီးဘဲရမယ်။ ဗမာလီး၊ ရခိုင်လီးတွေ အယင်စုပ်ပါအုံး။ စုပ်တတ်ရင် စဉ်းစားပေးမယ်။
အထက်ကတယောက်ရေးထားတာအထောက်အထားကလွဲနေပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်ဖို့အတွက်ဘင်္ဂလီတယောက်ဟာ၁၉၄၇ခုမြန်မာနိုင်ငံဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေအရပုဒ်မ၁၁ရဲ့အပိုဒ်ခွဲ(ဃ)အရသာနိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်ရှိတာပါ။တိုင်းရင်းသားမဖြစ်ပါ။ရခိုင်ပြည်ထဲမှာဘင်္ဂလီတွေအခြေချနေထိုင်လာတာနှစ်ပေါင်းထောင်ကျော်အမှန်တကယ်သာကြာတာမှန်ရင်ရခိုင်တွေပျောက်သွားတာကြာပါပြီ။ဒီနေ့လက်ရှိလူမွေးနုန်းအရပေါ့နှော်ဘင်္ဂလီတွေဒီထက်အများကြီးရှိပါလိမ်မည်။အင်္ဂလိပ်တွေကောက်ခဲ့တဲ့သန်းခေါင်စာရင်းအရရခိုင်ပြည်မှာရိုဟင်ဂျာလူမျိုးမရှိပါဘင်္ဂလီလူမျိုးဘဲရှိပါတယ်။ထို့အတူဗမာပြည်မှာလည်းပဲရိုဟင်ဂျာလူမျိုးမရှိပါ ဘင်္ဂလီ လူမျိုးဘဲရှိပါတယ်။ဒါတွေ
မင်းတို.ကောင်တွေ မွန်ဂိုလီးယန်းအနွယ်ဆိုတာမင်းတို့သိတယ်နော် မင်းတို.သမိုင်းေုကာင်းမင်းတို.သိရင် ခွေးဟောင်သလိုမဟောင်နဲ့ မင်းတို.ပါးစပ်ပိတ်လိုရပြီ မင်းတို.ရခိုင်တွေမိုးပေါ်ကကြလာတာမဟုက်ဘူးဆိုတာလဲမင်းတို့သိတဲ့နော် ဂျပန်နိုင်ငံမှာနေတယ်ဝထ္တုရေးဆရာ အေးချမ်းရေးတဲ့ဝထ္တုစာအုပ်ဖတ်ပေမအော်နဲ့ အဲဒီကောင် အေးချမ်းဟာ သမိုင်းဆရာမဟုက်ဘူး သူလိုရာလျှောက်ရေးပြီး လူမျိုးစုအရေးကိုဝင်ရောက်စွက်ဖက်အနှာက်အယှက်ရန်တိုက်ပေးနေတဲ့အကြမ်းဖတ်ဝါဒီဖြစ်တဲ့
Mrat Soe said...
ကျနော့်အနေနဲ့ကတော ကုလားတွေကိုတိုင်းရင်းသားအဖြစ်မပြောနဲ ကြည့်မရဘူးဗျာ။ ဘယ်နယ်..ဘင်္ဂလာကလွင့်လာပီးတော ငါတို့ရခိုင်ပြည်ကိုလုဖို့ကြိုးစားနေကြတယ်။ သားစဉ်မြေးဆက် (နိုး)ပါဘဲ။
min khine said...
ဟေ့ တွေပြီလား ကုလားတွေ ငါတို.မြန်မာတွေထဲမှာ ကချင် ကယား(ကရင်နိ) ကရင် ချင်း မွန် ရခိုင် ရှမ်း တိုင်းရင်းသားတွေ ဘဲရှိတာကို ဘာလို.ရိုဟင်ဂျာ ကဘယ်လို.လုပ် လာလိမ်လို.ရမှာလဲ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအားလုံးသိတယ် ဟိုတုန်းက ဘင်္ဂလိ(မူဂျာဟိတ်)ဆိုပြီးလာလိမ်တယ် အဲဒါမရတော့ ရိုဟင်ဂျာ ဆိုပြီးလာ လိမ်ပြန်တယ် ဒါလည်းမရဘူး ကုလားတိုရယ် နောက်ဘာလိမ်ရမလဲ စဉ်းစား နေကြလိမ့်မယ်ထင်တယ်။ ဘယ်လိုမှလိမ်လို.မရဘူး မြန်မာနိုင်ငံသားတွေ နွားမဟုတ်ဘူး ။ ကုလားတွေ မင်းအမေ မင်းနှမ မင်းအမ တွေကိုငါဖင်လောမယ်ကွာ ပြီးရင်ငါမင်းကို ပိုက်ဆံ နှစ်ကျပ်ခွဲပေမယ် ရမှာလား တိုင်းရင်းသားအဖြစ်တော့မပေးဘူးဟေ့သိလား။